“Ayeeyo Maxkamaddu Miyaanay Ahayn Meelaha Dadka Lagu Baadho!!!!”Garyaqaan Ibraahim Khadar | Haatuf Media Network
“Ayeeyo Maxkamaddu Miyaanay Ahayn Meelaha Dadka Lagu Baadho!!!!”Garyaqaan Ibraahim Khadar
Bal adba qanci oo ka dhaadhici in sharci iyo meelo dadka lagu kala saaro oo Maxkamado la yidhaa jiraan. Garaadkeeda fahansii in bilaysku dambiilaha uun qabtaan, generic Garsooruhuna dadka xaqooda kala siiyo, cough dambiilahana xukumo, anesthetist qofka bilaa dambiga ahna sii daayo.
Goortu waa goor subax hore ah amma goor-sheegtu ku dhaw dahay 10:00 subaxnimo amma aroornimo, goobtuna waxay ahayd suuqa weyn ee magaalada Hargeys, saldhiga dhexe meel aan 500 mitir ka fogayn. Waxaan u socday hawlo aan u soo baxay oo ka mid ah shaqo maalmeed waajib iga saarna inaan soo dhammaystirto.
Tallaabo nin dhallinyaro ah oo hal ka fool halawday ku cararo ayaan ku socday, sababtoo ah waxa i eryanaayey waqtiga, dhawr qof oo damcay in ay ila hadlaana salaam fog baan u buy generic cialis online gacan haadiyey, markaan cabaar socday ayaa baabur sida waayadan dambe Hargeysa caan ku noqotay is link for you get viagra online xidhay waddada, kadib xawaarihii socodku wuu is dhimay, hareerahana si taxadir leh iskaga eegay baabuurta. Waxaan sheeda ka arkay haweenay wayeel ah oo baabuurta kolba dhinac ugu ciiraysa.
Goobta ma ay joogin ciidammada nabadgelyada waddooyinka, dadkuna qof kasta wuxuu ku dedaalayey in aan halka uu cidhiidhsaday cidi ka qaadin, dadka lugaynaayana cidi ahmiyad iyo naxariis umay muujinayn, waxaan u dhawaaday haweenaydii si aan wadada u dhaafiyo, markii aan www.themavencircle.com ka codsaday in aan baabuurka ka eego, iskuna lug darno way iga aqbashay, nasiib wanaag gaadhigii noogu soo xigay wuxuu ahaa nin masuul ah oo xaqa wayeelnimo iyo dadka lugunaaya garaanayey, si fudud bay nuugu suuuragashay in aanu dhinaca kale waddada uga gudubno, kadib waxaan isku dayey in aan tallaabadaydii halkii ka sii wato, balse waxaan maqlay hadal haweenayda; “Ayeeyo aan wax ku waydiiyo adiga u eeg nin tacliinta lagu daraye, dadkayaga wayeelka ah wax ma fahanee.”
Waan u soo jeestay anigoo dareemay in ay leedahay waraaqii akhri, waxaan ka codsaday in aan meel baydhsan istaagno si aan ugu akhriyo, baabuurta iyo cidhiidhiga dadkana uga fogaano, waanay i raacday, meel aan ka fogayn agagaarka Telesom ayaannu istaagnay, kadib waxaan ka codsaday in ay ii dhiibto waraaqda qoraalku ku qornaa, gacantay iga gelisay, iyadoo xaynka ka soo saartay bac ay ku duuduuban tahay waraaq jactadan oo duuduubkii iyo goshii la geliyey ku silicday, kadib waxay ii raacisay; “Hooyo mid aan dhalay baa ii soo dirtay oo ninkeedii bay is haystaan, waxaanay doonaysaa in ay iska furto ee waraaqdan bay iigu soo qortay meel ay tidhi dadka lagu kala fura.”
Anigoo waqtiga i eryanaaya iyo hawsha ku degdegaya ayaan si toos ah u guda galay waraaqdii, kadib markasaan u sheegay in gabadhay dhashay doonayso in Maxkamadda Degmada Hargeysa looga soo furo dacwad furiin ah, si ay odaygeeda oo ay dhib ka tirsanaysay loogu kala fasaxo.
“Ba’nay, gabadhu miyey waalatay, jabnay, aheey ah, xaggeen aada, kii wiil ahaana ma joogo, waar halkee baas oo ay ii dirtay, waar ma tuugay noqotay gabadhaydii…”
Anigoo yaabay oo la wow look it cialis generic canada yaabay erayada catawga ah ee dhibtu ka muuqato ee hooyada afkeeda ka soo baxday waxaan waydiiyey waxa ku dhacay iyo in ay talo iiga baahan tahay, waxay iigu jawaabta; “Maxkamadu miyaanay ahayn meelaha dadka lagu baadho ayeeyo?
Amakaag iyo anfariir baa ila soo darsay markiiba, intaan ilaabay waqtigii iyo shaqadii ayaan isku dayey in aan ka dhaadhiciyo ayeeyadan fikrada khaldan laga aaminsiiyey goobaha sharci ee dadka lagu kala saaro, afkaan ula kala baxay taagtay, una sheegay in ay la mid tahay ‘Geedkii garta lagu goyn jiray oo awood dawladeed la socoto, sharci la isla yaqaan oo qoran oo qofna aanu dhaafi karina lagu kala saaro dadka.”
Warkaygu muu gelin, umanuu dhaadhicin maskaxda hooyadan wayeelka ah, cabaar fikirtay, korna ii eegtay, haddana is tidhi dhaqaaq;”Hooyo miyaad la shaqayn jirtay waadigan difacaaya qolyahan la leeyahay dadkay baadhaane.”
Weedhu kulula oo xannuun darrana, markasaan is idhi ma dhaqaaqda, haddana ku fikiray warka u sii yara taan taani, una sheeg in warar been abuur ah laga faafiyey, igu tidhi “waligay ma aan maqal maxkamad baa laba qof caddaalad ku kala xukuntay, bariba wiil aan dhalay nabar lagu dhuftay, kadib markaasuu igu yidhi waa la ii xukumay, lacagtiina Garsooraha igala hadhay oo xaqaygii halkaasuu yaala. Markii dambena Ayeeyo wuxuu ii sheegay in garsoorihii ka dhacay,”
Markii aan warraystay sida wax ugu dhaceen waxaan ogaaday in aan Garsoore xaq qaadin, balse wiilka ay dhashay hantida ka qarsanaayey hooyadii si aanay wax u cejaguera.com waydiina sheeko u dhisay.
Waxaan la http://www.axiomfilms.co.uk/viagra-prices socodsiiyey in saldhigyada amma Maxkamadaha laga dacwoodo oo qof kasta oo dulman qof bilaash ugu dooda oo sharciga yaqaan loo qabto, balse markaan bilayska soo qaaday bay cadhootaay, iiguna jawaabay wejigeeda oo cadhadii ka soo if baxday; “Hooyo bilaysku miyaanay ahayn bilays naayaga la sheego ee dadka la yidhi mijin bay ku xidhaan.”
Kaba sii darran oo ciidankiiba ka aamin baxday ilaalin jiray ee hadh iyo habeen dhaxanta darteed u taagna, u garaabay oo ogaaday in fikrad khaldan iyo hadal hayn been abuur ah la soo gaadhsiiyey, una sheegay in dadku sida aanay dhammaan u wada khaldanayn bilayskuna ay ku jiraan qaar tiro badan amma intooda badan fiican tahay, balse xaasha lilaah ka dhaadhicin kari waayey.
Aakhirkii nink askari ah baan na soo ag maray u yeedhay, kadib ku idhi adeer dhibtaasa jirta ee bal kaalay ka dhaadhici shaqada aad qabataan, wuxuu ahaa nin waayeel ah oo aan ka dareemay inuu muddo aad u badan bilays ahaa, darajo ahaana kabtan amma saddex xidigle ah xaqiidii ma aan garanayn, balse ilaah baa isku beegay, la hadal hooyadii, una sheeg in ay dambiilaha qabtaan, dadkana difacaan si xeeladaysan ugu sheeg, is afgarte oo hadal waayeel lagu wadahadal, garaad iga maqnaana igu biiri. Waxaan la socodsiiyey in ay qof kaxaysato, tagtagna Maxkamada si dacwadeeda iyo ta inanteeda haddii aan buy viagra now xal kale loo hayn ay uga furato, igu waafaqday, dhaqaaqdayna iyadoo aaminsan Maxkamadaha iyo in garsoorayaal wanaagsan jiraan.
Ducana noo raacisay, noona sheegtay in si khaldan waligeed da’da ay jirtay hadaladu u soo gadhaayeen, looguna sheekaynaayey in ay Maxxkamaduhu dadka dhibaan, baadhaan, xaqooda ka dhacaan.
Waxa jira kumanaan qof oo hooyadan da’ leeg iyo kuwo ka yar yar oo aan sharciga fahansanayn, caddaaladda iyo meelaha lagu go’aamiyana si khalad ah looga aaminsiiyo, garsoorku ma khaldana, waxaana dhici karta in qof kasta oo xukun laga go’yaa, garsooruhuna sida caddaaladdu la tahay go’aamiyo, haddana dacaayad iyo warar aan jirin oo buunbuunin ah dadka dhegahooda lagu riday.
Haddii dadku ka rajo dhigo caddaaladda, sharciga yaa u look there levitra 10 mg kala xukumi, xaqooda yaa kala siin, dad aan caddaalad aaminanayn siday amni iyo kala dambayn u heli?
Garyaqaan Ibraahim Khadar Siciid